आमा, भैंसी र घाँस – भविन धिताल – ज्ञानगुन.com
July 6, 2016 August 26, 2016 gyangun
भैंसी र घाँस मानौं उनको आफन्ती, माइती, मावली सबै भैंसी नै हो । उनि बिहानै ४ बजे नै उठ्छिन अनि गोठमा गएर भैंसी र बाख्राको स्थिती के कस्तो छ भनेर हेर्छिन । आगो फुकेर भैंसीलाई पानी तताउँछिन र भाकारो सोर्न तिर लाग्छिन । भैंसी र बाख्रालाई पानी, पराल गर्दैमा बिहानको ६ बजिसकेको हुन्थ्यो । उनि हतार-हतार गरेर उज्यालो नहुँदै घर पोत्ने काम लगायत अरु सबै काम सकिसकेकी हुन्थिन । तेती बेलासम्म केटाकेटी र श्रीमान सुतिरहेका हुन्थे । घरको काम धेरै नै हुन्थ्यो- पानी भर्ने काम, गोबर ग्याँस मा गोबर घोल्ने काम, घर, आँगन बढार्ने काम, अरु थुप्रै कामहरु हुन्थे । उनि हतार-हतार गरेर सबै काम सकेर भैंसी दुहुने काम लगायत सबै सकेर, हतार-हतार भात, दाल ,तरकारी पकाएर जङल जाने तरखरमा हुन्थिन्- भैंसीलाई घाँस काट्न । तेती बेला बिहानको ७ बजिसकेको हुन्थ्यो। तातो चिया हतार-हतार सुरुप्प पार्दै साथीहरुले आज छोडेर गैसके, बेर भो आज भन्दै अत्तालिदै डोको, नाम्लो,अरिया लिएर चितवन राष्ट्रिय निकुन्ज पुग्थिन्, भैंसीलाई घाँस काट्न । जंगलको बिचमा, कता राम्रो, कलिलो सिरु पाइन्छ भन्दै उनि भौतारिन्थिन्, उनको भैंसीको लागि । टन्टलापुरे घाममा,भोको पेटमा एक डोको अनि सिरुले भरिएका बोरा बोकेर उनि उकालीतिर ,आफ्नो घर तिर आउथिन । तेती बेला घाम चर्किसकेको हुन्थ्यो । बिहान पकाएको भात हिँउचुलिको हिँउ जस्तै भैसकेको हुन्थ्यो । केटाकेटी र श्रीमानले खाएर छाडेका असरल्ल ति भाँडाहरु, वरपर माखाहरु भन्किरहेका हुन्थे । उनि पहिला भैंसीलाई घाँस हाल्थिन । उनलाई आफ्नो भोकको भन्दा भैंसीको बढी चिन्ता हुन्थ्यो । भैंसीलाई घाँस हालेर , गोबर सोरेपछि मात्रै उनि भात खान भन्छाकोठा तिर लाग्छिन । मानौ उनको लागि भैंसी नै अति ठुलो सम्पत्ति हो । एउटा असल बिद्यार्थिले मेहेनत गरेर पढेजस्तै उनि त्यसरी नै मेहेनतका साथ भैंसीलाई घाँस काट्थिन । भैंसीले पानी नखाएको दिन , दुध नदिएको दिन उनि साह्रै दुखी हुन्थिन र के भयो आज भन्दै नरमाइलो मान्थिन र कहिलेकाहीँ केटाकेटीसँग पनि रिसाउँथिन , किनकी उनको भैंसीले आज पानी खाएको छैन , उनको भैंसी आज बिरामी परेजस्तो छ । उनि घरको सबै काम सकेर राती अबेर सुत्छिन । उनलाई भोली पनि अलि छिट्टै उठ्नुछ अनि भोली पनि हतार-हतार जंगल जानु छ , भैंसीलाई घाँस काट्न । शायद उनि सपनामा पनि भैंसी अनि भैंसीलाई जंगलमा गएर घाँस काटिरहेको देख्छिन होला ? ? ? सम्पुर्ण घाँस काटेर जीवन बिताएका आमाहरुमा समर्पित । २०६९ साल ,चैत प्रगतिनगर । नियमित डायरिबाट ।
आफ्नो प्रतिक्रिया दिन नबिर्सनु होल
Article, Latest News, Nepali Article
Owner of Baton Rouge’s convenience store says Alton Sterling was Murdered by white two Cops.